Coral Reef: သို့... မောင်
ဆုမြတ်မိုး said on March 13, 2015 at 6:59 AM
ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာ ။ အမရဲ့ မောင် ဆီးရီးကိုအရမ်းသဘောကျတာ. ခဏခဏပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်..။ အမချစ်သူလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံမှာ....အေးချမ်းသာယာနေမှာပါ ။ ဒီထက်ပိုမပိန်စေနဲ့တော့နော်...။ မိသားစုအပေါ်မှာ တာဝန်ကျေသလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းဂရုစိုက်ပါလို့..။
Anonymous said on March 13, 2015 at 9:07 PM
i believe he will be getting the deeds done for him while watching over you from the above...
Anonymous said on March 13, 2015 at 9:26 PM
So sorry for your beloved Maung!
Ree Noe Mann said on March 14, 2015 at 7:37 AM
ပိန်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အထဲမှာ ရီနိုလည်း ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်မ ကံကောင်းမှာပါ။
ဇွန်မိုးစက် said on March 14, 2015 at 11:05 PM
ကျေးဇူးပါ ညီမဆုမြတ်ရေ။ လူပိန်သွားပေမယ့် ကျန်းမာအောင်တော့ အစ်မ အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်နေပါတယ်။ ဖိုးသူတော်အတွက် တောင်ဝှေးလဲလို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတော့လေ။
Yes, I am sure he is getting the good deeds I have done along the way. Thanks for your comment and visit my blog so far.
Thank you, anonymous. I've moved on since long time ago.
ကံကို သိပ်မယုံဝံ့ပေမယ့် ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကိုတော့ မျှော်လင့်ချင်သေးတယ် ရီနိုရယ်။
Adora etc. said on March 16, 2015 at 3:20 PM
I am sorry for your loss Ma.
blackroze said on March 19, 2015 at 1:14 AM
facebook မှာတင်ထားတာတွေပေမဲ့ သေချာမဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး
ပစ်လည်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံရောက်နေတာလည်းပါတာပေါ့ ။
ကျန်ခဲ့တဲ့သူက တော့ တနင့်တပိုးခံစားနေရဆဲဆိုတာ
ဇွန်မိုးစက် said on March 19, 2015 at 11:00 PM
Thank you, sis Adora.
ပစ်ရေ... ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါနော်။ ပစ်လေးရဲ့ ရင်ထဲကဆုတောင်းအတွက်လည်း မဇွန်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
မောင်မျိုး said on March 30, 2015 at 2:12 PM
အရင်က ကိုညီ့ဘလော့က ကော့မန့်မှာနာမည်ရင်းနှီးနေပေမယ့် မရင်းနှ်ီးဘူး အပြင်မှာဆုံပြီးမှပဲစာတွေလာဖတ်ဖြစ်တော့မယ် အစ်မရေ
စစချင်းဖတ်မိတဲ့စာကတော့စိတ်မကောင်းစရာနဲ့စမိပြီ အစ်မကိုတောင်မေးမိသေး အဲ့တာကဖြစ်ရပ်မှန်လားဆိုပြီးတော့လေ။
အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အပြင်မှာလည်းလှပြီးကျက်သရေရှိနေတာတော့အမှန်ပဲ တည်ငြိမ်တဲ့အလှပေါ့ဗျာာာ
ကြယ်ပြာ said on May 8, 2015 at 2:32 PM
ခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်။ အစအဆုံးကို နောက်တစ်ခေါက်သေချာပြန်ဖတ်မယ်။
ရင်ငြိမ်းသူ said on May 11, 2015 at 7:54 PM
ဖတ်တဲ့အကြိမ်တိုင်းလည်း မျက်ရည်ဝဲတယ်။ :(
Ma Tint said on May 19, 2015 at 7:56 PM
ဇွန်လေးရေ... ဘလော့ဘက်ကိုမလှည့်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတွေ အတော်များများ အခုမှပြန်ဖတ်ရတော့တယ်။ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးဟာ အနတ္တသဘောပဲလေနော်။